Ibhizinisi, Buza uchwepheshe
Ama Tattoos abonisa abameleli bomndeni wekati athandwa kakhulu. Zingatholakala ezinhlobonhlobo eziningi, izinkolo kanye nezimbali. Kodwa ngaphambi kokuba udwebe umzimba wakho, kufanele ufunde ngokucophelela umlando kanye nencazelo yesithombe.
I-Lynx isilwane somndeni wekati, esingenayo ubukhulu be-panther noma ijubane lomswakama. Kodwa-ke, yilawo makakati anombono wokubhoboza kanye nekhono lokubona ingozi ngamatshe nezithiyo, ukuzwa isicupho futhi ahlasele.
Wonke amandla we-trot kumapayipi akhe ahlukumezayo futhi aqinile. I-tattoo "lynx" kuleli cala ingakhetha kalula labo abafuna ukubonisa ukukhanya kwabo, ukuqapha, ikhono lokudlula izithiyo ezitholakala endleleni yokuphila.
U-Lynx angakwazi ukunqoba isitha ngobuqili empini, ukunquma ubunzima ngisho nangaphambi kokuqala kokubukeka kwabo, ukuba avele enqobile empini enzima kakhulu. Uma unenjongo, uzizethemba futhi unenkani, khona-ke i-tattoo "trot" iyokulandela. Ingabe lawa ma-tattoos kufanele abantu abanamandla emoyeni nangomlingiswa, babe nemigomo yabo yokuphikelela ephikisanayo.
Kungase kubonakale ukuthi i-lynx - izilwane zinesivila futhi ziphoqa. Noma kunjalo, ukuqala kokuqala kuyakhohlisa. Yini umuntu angayisho ngomdwebo? I-lynx izokutshela ukuthi naphezu kokubukeka kwayo okuzolile, ngomzuzwana ingabuthana uma kwenzeka ingozi futhi iyolwa nokuphela kokunqoba, njengoba bethi, hhayi ngokuphila, kodwa ngokufa.
Abantu abazenza i-tattoo ngesimo se-lynx baqondile. Ababheki ukusebenza, kodwa qhubeka phambili.
U-Lynxes uyaziwa ngokudala imindeni eqinile kakhulu futhi anakekele kahle inzalo yabo. Ngakho-ke, le tattoo iphelele kubantu abomndeni abathanda ukufudumala kwezindlu, izingane, ubuzwe nozwe.
I-Lynx emzimbeni wesilisa nowesifazane
Kuvame ukukholelwa ukuthi tattoo enjalo ingu-lynx - i-tattoo yeduna kuphela. Yiqiniso, umdwebo wesilwane esinjalo uzobukeka ube mkhulu emzimbeni onamandla wesisulu. Kodwa i-tattoo "lynx", okusho ukuthi "amandla angaphakathi", ingaba umhlobiso nomzimba wentombazane enesibindi enomlingiswa oqinile.
Ukusebenzisa umzimba umdwebo onomfanekiso we-lynx, umuntu uthola uhlobo lwe-amulet, i-talisman. Uzosiza ukubona izithiyo, uphelele ukuhlolwa kokuphila ngesithunzi futhi uphume kunoma yisiphi isimo ngokunqoba. Kwezinye ukuhumusha, umdwebo we-lynx uzosho ukuqapha, kwabanye - isipho sokubona kwangaphambili, iso elibona konke.
Izindleko eziqhubeka njalo nezingaguquguquki
Iyini ikhodi ye-ZIP? Incazelo kanye nomlando wesenzakalo
I-coefficient yenzuzo kanye nenzuzo yezimali zokusebenza
I-headset yefonti, usayizi kanye nemingcele eyisisekelo
Ubude emomozini: Iqiniso Noma Inkolelo
Bill Pekston - umlingisi, screenwriter, umkhiqizi, umqondisi
Izinhlobo izingxabano: umqondo futhi ezahlukene ngeengaba
Kolwelwesi Okungalapheki ne-acute umntwana: izimpawu zesifo